Home News Maxaa loo ceyriyay Taliyayaasha NISA? Yaase ka danbeeyay?
Maxaa loo ceyriyay Taliyayaasha NISA? Yaase ka danbeeyay?
Waxaa asbuucii la soo dhaafay shaqada laga eryay dhowr taliye oo dhamaantood ka wada tirsan ciidanka NISA. Waxaa shaqo fariisin lagu sameeyay:
1)Taliyaha Ciidanka Gaashaan – NISA
2)Taliyaha fadhiga garoonka diyaaraddaha – NISA
3) Taliyha hogaanka Isgaarsiinta iyo IT-ga
Dhamaan saraakiisha iyo hogaanka lagu sameeyay shaqo ka fariisinta waa taliyayaal in mudo ah ku soo jiray cidanka, aqoon fiican u leh shaada loo igmaday. Qaarkoodna uu dhaawac ka soo gaaray iyaga oo gudanayo waajib Qaran. Shaqo ka fariistaan waxa sameeyay oo amray RW Xassan Cali Kheyre
Saraakiishaan waxa lagu ceyriyay waxaa ay su’aal ka keenayn hub dhawaan u soo dagay ciidanka NISA laakiin RW Kheyre uu amaray in si gaar ah isaga loogu xareeyo. Sida MOL loo xaqiijiyay, hubka dhawaan la soo iibiyay ayaa waxaa dulaal ka ahaayeen laba nin oo kala jooga xafiiska RW Xassan Kheyre iyo Fahad Yaasiin. Markii diyaaradii siday hubka ka soo degtay MIA dhanka busteejada AFFISIYONI xigta ayaa taliyayaashii jooghan garoonka waxa ay diideen in hubka magaalada galo iyada oo aan la xaqiijin tiradiisa, noocyadiisa isla markaana aan si rasmi ah loo sheegin meesha la geeynayo hubka.
Iyaga oo ilaalinaya sharciga iyo mas’uuliyada ka saaran aminga ayaa ciidan ay horkacayeen taliyaha ciidanka gaashaan Axmed Aden iyo Taliyaha Fadhiga MIA (garoonka diyaaradaha) ee NISA ay diiday in hubka galo magaalada Muqadishu ilaa la maro wadadii sharciga ahayd. Waxa ay sheegeen in dhib ka imaan karo hadii hubkaas gacanta u galo kooxda nabad diidka ah. RW Kheyre oo markii hore is qar-qarinayay oo doonayay in hubka meel uu isaga cayintay la geeyo, laakiin amarka qof kale bixiyo ayaa warkii maqalay. Isaga oo xaanaaqsan ayuu RW Kheyre amray in la fasaxo hubka. Saraakiisha oo aan diidi karin amarka RW Kheyre ayaa fasaxay hubkii isaga oo aan la xisaabin, Hubkii waxaa kadibna loo gelbiyay dhanka MADINA GATE sidaas na magaaladii ayuu ku soo galay. Ficilkaan uu ku dhaqaaqay RW Kheyre waxaa uu khatar ku yahay aminga dalka guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqadishu. Ciidanka AMISON oo aad uga wal-walsan hubka sida sharci darada looga baxshay garroonka diyaaradha ayaa la xiriiray taliyaha ciidanka qalabkasida, Agaasimaha NISA, iyo taliyaha booliska sadaxduba waxa ay u sheegeen in ayan waxba kala socon hubka iyo meesha loo qaaday.
RW Kheyre oo ay wal-wal ku hayso ogaanshaha ay ogaadeen taliyayaasha kor ku xusan ayaa waxaa uu amray in cidkastoo oo wax ka ogayd imaanshaha hubka su’aalna ka keentay shaqo ka fariiisn lagu sameeyo sidaas darteed ayaa saraakiil ku taagan sharciga shaqadooda ku waayeen. Waxa la rumaysan yahay in hubkaas lagu wareejiyay Ciidanka Xasilinta oo ah ciidan uusamaysatay RW Kheyre kaas oo intiisa badan ka soo jeeda beesha uu ka dhashay RW Kheyre. Waxaan shaki ku jirin ficilada uu sameeynayo RW Kheyre in ay keeni doonto dagaal sokeeye. Nasiib xumano Madaxweynhii loo dooraty in uu dalka hogaamiye ayaa daawanayo colaado uu abuurayo RW Kheyre.
Previous articleIImaanka beesha Mudulood oo ka digay Ciidan beeleedka “Xasilinta”
Next articleWar Deg Deg ah:-Askari Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho
Wasiirka Wasaarada Haweenka oo bilowday bur burinta Ururka Haweenka Qaranka